Gündoğan oo sheegay waxa ay u baahan tahay Man City si ay markale ugu guuleysato Premier League – Gool FM
Gündoğan oo sheegay waxa ay u baahan tahay Man City si ay markale ugu guuleysato Premier League
(Manchester) 20 Sebt 2020. Xiddiga kooxda Man City ee İlkay Gündoğan ayaa xaqiijiyay in sky blue ay u baahan tahay diirad saarid badan inta lagu guda jiro kulamada Premier League si ay markale ugu guuleysato horyaalka, maadaama ay ku guuldarreysatay xilli ciyaareedkii hore.
İlkay Gündoğan ayaa carabka ku adkeeyay in kooxda ay tahay inaysan markale dib u soo celinin qaladkii xilli ciyaareedkii hore, ee ahaa inay guuldarreysteen kulamo badan oo fudud, taasoo Liverpool u suurtagelisay inay ku guuleysato horyaalka Premier League.
Wargeyska “The Guardian” ee dalka England ayaa daabacay wareysi uu bixiyay İlkay Gündoğan, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Xilli ciyaareedkii hore waxaan dhalinay goolasha ugu badan, Ederson wuxuu helay gacmo gashi dahabi ah, maadaama uu ka baxay kulamo badan shabaqiisa oo nadiif ah, isagoo aan wax gool ah laga dhalinin, laakiin wali waa inaan horumar sameynaa sababtoo ah waxaan guuldarreysanay kulamo badan”.
“Kulamada qaar waxaan ku guuleysanay si fudud, halka kulamada qaar aan sameynay qaladaad mana ka faa’ideysanin fursadaheena waana guuldarreysanay”.
“Macquul ma ahan inaan guuleysano kulan kasta, laakiin waxa aan sameyn karno waa isku dayga inaan wax ka barano guuldarooyinkeena”.
“Way adag tahay in la gaaro 100 ama 98 dhibcood sanad kasta, laakiin haddii aan dooneyno inaan mar kale u dagaalano dhamaan tartamada kala duwan ee xilli ciyaareedkan, waa inaan ku dhowaano heerkaan”.